ဆီးချိုရောဂါထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း - intouchmedicare
Last updated: 2022-03-25 | 662 ကြည့်ရှုခြင်း |
ဆီးချိုရောဂါသည်မည်သည့်အရွယ်မဆိုဖြစ်နိုင်သောရောဂါမျိုးဖြစ်ပါသည်။ကလေး/လူကြီးတန်းတူ မည်သူမဆိုတန်းတူဖြစ်နိုင်သောရောဂါဖြစ်သည်နှင့်အမျှ လက်ရှိအချိန်တွင်နှစ်စဥ်အားဖြင့်တိုးမြှင့်လာပြီး အများအားဖြင့် အ၀လွန်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တတ်ပြီး စားသောက်မှု့ပုံစံ(သို့)အသက်အရွယ်ရလာခြင်းကြောင့်လည်း ပါ၀င်ပက်သက်မှု့ရှိပါသည်။အကယ်၍ဤရောဂါဖြစ်လာပြီဆိုလျှင်နောက်ဆက်တွဲရောဂါပြဿနာများ၀င်ရောက်ရှုပ်ထွေးလာမှု့အခြေနေအားဖြစ်တတ်သည့်အပြင်အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် ထိုကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာအားထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ရုတ်တရတ်ပြန်မဖြစ်စေရန်(သို့)နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများအတွက်ကုသမှု့သည်အရေးကြီးပါသည်။မည့်သည့်နည်းလမ်းများရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော အကြံဥာဏ်ကောင်းများအား လာရောက်မှာကြားပေးပါမည်။
ဆီးချိုရောဂါ (Diabetes Mellitus) ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်မှသကြားဓာတ်အားအပြည့်အ၀စုပ်ယူနိုင်မှု့မရှိခြင်းကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုမြင့်တက်စေပါသည်၊၊၎င်းသည် သွေးတွင်းအင်ဆူလင်ဓာတ်ပျက်သွားမှု့ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲရလဒ်အဖြေမှာ ပုံမှန်ထက်ရေဆာခြင်း၊မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊အစားများပေမဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊လက်ဖျားခြေဖျားများထုံခြင်း၊မျက်လုံးမှုန်၀ါးခြင်း၊သွေးတိုးရောဂါ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပျက်စီးနိုင်ခြင်း၊အကယ်၍ဒဏ်ရာဖြစ်လျှင်ပျောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းရှိပါကရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းအားရှာဖွေနိုင်ခြင်းနှင့်ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ရန်(သို့)ရောဂါပြင်းထန်မှု့နှင့်နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ၀င်ရောက်ရှုပ်ထွေးလာမှု့အခြေအနေများအားလျော့ချနိုင်ပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါဆိုလျှင် အားလုံးကြားဖူးရင်းနှီးကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ဆီးချိုရောဂါသည်ကွဲထွက်သွားသော အမျိုးအစား4မျိုးရှိပါသည်။၄င်းမှာ
1. ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား 1
မကြာခဏတွေ့ရတတ်သောဆီးချိုရောဂါသည်အသက် 40 အောက်လူငယ်များတွင်ပင်တွေ့နိုင်ပါသည်။အကြောင်းမှာ သရက်ရွက် (Pancreas) အင်ဆူလင်ဓာတ်မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လူနာသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5-10 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များ၏သကြားဓာတ်အားမလျော့ချနိုင်သည့်အတွက် ဤကဲ့သို့သောအခြေနေမျိုးတွင် အင်ဆူလင်ပုံမှန်ထိုးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
2. ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား 2
ဆီးချိုရောဂါအတွက်အမျိုးအစား2သည် တွေ့ရများသောအသက် 90-95 ရာခိုင်နှူန်း တွင်အဖြစ်များဆုံးဖြစ်ပါသည်။အကြောင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှရသင့်သောအင်ဆူလင်ခုခံမှု့အား ပြည့်၀စွာမရရှိခြင်းဟုခေါ်သော အင်ဆူလင်ဓာတ်မတိုးသောအခြေနေမျိုးဖြစ်ပါသည်။အ၀လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်ခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇလိုက်တတ်ခြင်းကြောင့်လည်းကူးစက်နိုင်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ ဆရာ၀န်ကြီးကြပ်မှု့အောက်နှင့်ဆေးသောက်ခြင်းဖြင့်ဆီးချိုရောဂါအားကုသနိုင်ပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါမဖြစ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့လည်း သို့ပေမဲ့ကိုယ်၀န်ဆောင်ချိန်တွင်ဖြစ်သောဆီးချိုရောဂါသည်အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်တတ်ပြီးလျှင်နှင့် မိခင်ရောကလေးကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ကိုယ်၀န်ဆောင်သက်တမ်း 24-48 ပတ်အချိန် တစ်ရာတွင် 2.1 ခန့်တွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့် မီးဖွားပြီးနောက်လက္ခဏာပျောက်သွားပေမဲ့လည်း ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား2ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
4. အခြားဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား (သို့) ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းမှာ
ဆီးချိုရောဂါမျိုးဟူသည် ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါသည်။၄င်းမှာ သရက်ရွက် (Pancreas) ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ပုံမမှန်ခြင်း၊အင်ဆူလင်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အားနည်းခြင်း၊အချို့သောဆေး၀ါးများသုံးစွဲခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုး၀င်မှူ့တစ်မျိုးမျိုးကြောင့် ဥပမာ CMV, Rubella အစရှိသောကူးစက်ရောဂါများဖြစ်ပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက် အစားအစာစားသုံးမှု့သည်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကွဲပြားခြားနားသောစားသောက်မှု့ပုံစံကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။၄င်းမှာ ရောဂါပြန်ဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။သကြားအချိုဓာတ်အလွန်စားများခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပမာဏအလွန်စားများခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ သကြားအချိုဓာတ်အားမြင့်တက်စေပါသည်။သင့်တော်သောစားသောက်မှု့စနစ်ပုံစံအားပြောင်းလဲမှု့သည်လည်းဆီးချိုရောဂါထိန်းသောနည်းလမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် အထူးနှိုင်းယှဥ်၍ရသောစိတ်ကိုလန်းဆန်းကြည်လင်စေပြီးကောင်းစွာအိပ်ပျော်စေပါသည်။တည်ငြိမ်သောအကျင့်သားရခြင်း အထူးသဖြင့် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများသည် အင်ဆူလင်ဓာတ်လျော့ကျစေရန်အတွက်နှင့်သကြားအချိုဓာတ်မြင့်ခြင်းမှလျော့ကျစေရန် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအားအလွန့်အကျွံ့ မပြုလုပ်ပဲ အတော်အသင့်သာလုပ်သင့်ပါသည်။
3. ဆေးသောက်ခြင်း (သို့) သတ်မှတ်ထားသောပမာဏအတိုင်းအင်ဆူလင်သုံးခြင်း
ဆရာ၀န်၏ကြည့်ရှု့ထိန်းချုပ်မှု့အောက်တွင်ဆေးသောက်ခြင်း(သို့)သတ်မှတ်ထားသောပမာဏအတိုင်းအင်ဆူလင်သုံးခြင်းသည် ရေရှည်ကုသခြင်းအတွက်ကောင်းသောရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်းအားကာကွယ်ပေးရာတွင် ကူညီမှု့ပေးပါသည်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အားပုံမှန်အခြေအနေတွင်ထိန်းထားပေးနိုင်ပါသည်။နောက်ဆက်တွဲရောဂါအမျိုးမျိုးမှလည်းလျော့ချပေးခြင်းနှင့် ဆရာ၀န်နှင့်တွေ့၍ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကုသမှု့ရလဒ်များအားကောင်းမွန်စေရန်ကူညီထောက်ပံ့မှု့ပေးပါသည်။
လုံလောက်စွာအနားယူခြင်းသည် သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အား ပုံမှန်ထိန်းထားရန် ကူညီထောက်ပံ့မှု့ပေးပါသည်။ ချိုသောအစားများဆာလောင်ခြင်းအားမခံစားရစေပဲ ၄င်းသည်ဆီးချိုရောဂါကုသရာတွင် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောသကြားအချိုဓာတ်အား အလွန်မြင့်မားစေခြင်းမရှိပဲ အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ခံစားရပါက အချိုဓာတ်ပမာဏအလွန်မြင့်မားမှု့ ရှိ/မရှိအားကြည့်ရန်အတွက် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အားစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုသည် (Cortisol) ဟော်မုန်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။၄င်း အချိုများစားလိုစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်နှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်အားချေဖျက်ရန်အတွက်တာ၀န်ရှိသည့် (Gulcagon) ဂလူခါဂွန် ဟုခေါ်သောဟော်မုန်ဓာတ်ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။သွေးတွင်း ဂလူးကို့စ် (Glucose) ဓာတ်အားမြင့်စေသည့်အတွက် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အားကိုပါလျင်မြန်စွာရုတ်တရက်မြင့်စေသည့်အပြင် နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ၀င်ရောက်ရှုပ်ထွေးလာမှု့အခြေနေအားလည်းဖြစ်စေပါသည်။
ရေကိုလုံလောက်စွာသောက်ပေးခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပြည့်စုံသောညီမျှမှု့အား ရရှိရန်ဖန်တီးပေးမှု့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ခန္ဓာကိုယ်အားရေဓာတ်ဖြည့်ပေးသည့်အတွက် လန်းဆန်းမှု့ကိုဖြစ်စေပြီး အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ပိုလျှံသောရေများအား ဆီးမှတစ်ဆင့်စွန့်ထုတ်နိုင်စေသည်။သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏအား ပုံမှန်ဖြစ်စေရန် ကူညီပေးသည်။ထို့ကြောင့် ရေကိုလုံလောက်စွာသောက်ပေးခြင်းသည် လျစ်လျူမရှု့သင့်သော အရေးပါသော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အစပိုင်းတွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဆီးချိုရောဂါသသည် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရှိခြင်းနှင့် ဦးစွာတွေ့ရှိခဲ့ပါက ကုသနိုင်ခြင်း(သို့)ရောဂါပြင်းထန်မှု့အားထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ၀င်ရောက်ရှုပ်ထွေးလာမှု့အခြေနေအား လျော့ကျစေခြင်းနှင့် ရောဂါအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် သင့်တော်သော အပြုအမှုများအားလိုက်နာပြုမှုသင့်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ (Intouch Medicare) ဆေးခန်းမှဆီးချိုရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါအားကုသရန် ပုံမှန်ဆရာ၀န်နှင့် ထိရောက်သောကုသမှု့ရလဒ်များကို အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန် အိမ်တိုင်ရာရောက်(ဘန်ကောက်မြို့တွင်းသာ)ကြည့်ရှု့ပေးသော၀န်ဆောင်မှု့ရှိပါသည်။စိတ်၀င်စားသောသူများအတွက် တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်ဆုံးသောအဖြေများနှင့် ၀န်ဆောင်မှု့ပေးရန် အိမ်အနီးရှိ Intouch Medicare ဆေးခန်းမည်သည့်ဌာနခွဲတွင်မဆို ၀န်ဆောင်မှု့ပေးနေပါသည်။ကျွန်ုပ်နှင့်နီးသောဆေးခန်းဟု Google တွင်ရိုက်၍ရှာဖွေခြင်း (သို့) Website ၀က်ဆိုက်ရှိဆက်သွယ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါ သွေးတိုးရောဂါ ကျန်းမာရေးစစ်ခြင်း သင်နှင့်နီးသော သကြားအချိုဓာတ်စစ်ခြင်း သွေးတိုးမြင့်ခြင်း သကြားဓာတ်မြင့်ခြင်း โรคเบาหวาน โรคความดัน ตรวจสุขภาพ ใกล้ฉัน ตวรจน้ำตาล ความดันสูง น้ำตาลสูง